“Mumafirimu musikana anenge achinzi ndiye musikana ari pamberi anenge asingadi kuteerera zvaanoudzwa uye anenge achiita zvinhu zvokuti aonekwe nevamwe. Mafirimu acho anoita sokunge kuti tose vasikana ndozvatiri.”—Erin.
“Vasikana vomuTV vanozvinetsa panyaya dzechitarisiko, hembe uye vakomana uye zvose izvi vanenge vachizviitira kuti vaonekwe.”—Natalie.
“PaTV kashoma kuti musikana anenge achinzi ndiye ari pamberi, asanwa doro, asarara nevakomana, uye ateerere vabereki. Kana akasaita izvozvo anenge ava kutonzi musande chaiye.”—Maria.
Bhaibheri rinoti: ‘Regai kuzvienzanisa nenyika.’—VaRoma 12:2.
Bhaibheri rinoti: ‘Vanhu vanoziva zvavanoita, vanoita kuti simba ravo rokunzwisisa rirovedzwe kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa.’—VaHebheru 5:14.
Bhaibheri rinoti: “Zvinhu zvose zviri munyika—kuchiva kwenyama nokuchiva kwemaziso nokushamisira nezvinhu zvoupenyu zvomunhu—hazvibvi kuna Baba, asi zvinobva munyika.”—1 Johani 2:16.
Pazvinhu zvakanaka zvawati unoda kuita chitanga kudzidzira iye zvino. Bhaibheri rinoti: ‘Pfekai unhu hutsva, huri kuitwa hutsva maererano nomufananidzo woUya akahusika’ kwete maererano nezvinobudiswa paTV.—VaKorose 3:10.
Tevedzera vanhu vane tsika dzakanaka. Vamwe vacho vanogona kunge vatori mumba menyu vakadai samhamha vako kana kuti tete. Vamwe ndevaunoziva vane tsika dzakanaka. Zvapupu zvaJehovha zvine vakadzi vakawanda vavanonamata navo vane tsika dzakanaka.—Tito 2:3-5.
“Musikana chaiye ndeuya anogutsikana nezvaari. Haazvitarisiri pasi. Anozvitora semunhuwo pane vamwe.”—Hadassa.
“Musikana chaiye haazvitarisiri pasi. Kana ari paruzhinji haatsvaki kuonekwa. Asi kana vanhu vakamutarisa haabvi akura musoro achizviona seanonyanya kukosha.”—Marissa.